कसरी मेरो आईफोन खोज्नुहोस् असक्षम गर्ने मोबाइल फोरम
ईडर फेरेनो | 06/10/2021 12:16 | म्याक, अपरेटिंग प्रणाली
एप्पल उपकरणहरु संग प्रयोगकर्ताहरु को निपटान मा सुरक्षा उपकरण को एक भीड छ। यी प्रकार्यहरु मध्ये एक मेरो आईफोन खोज्नुहोस्, अमेरिकी फर्म को फोन को लागी उपलब्ध छ। यो एक सुविधा हो कि डिजाइन गरीएको छ ताकि हामी घटना मा हाम्रो फोन पत्ता लगाउन सक्षम हुनेछौं कि हामी यसलाई गुमाएका छौं वा यदि यो चोरी भएको छ। तेसैले यो ती कार्यहरु हो कि धेरै को लागी ठूलो मद्दत को हुन सक्छ।
सामान्य कुरा यो हो कि यो प्रकार्य हर समय सक्रिय राखिएको छ, जब देखि हानि वा चोरी को मामला मा हामी मेरो आईफोन पत्ता लगाउन र यस प्रकार फोन पत्ता लगाउन को लागी सक्षम हुनेछौं। जे होस् यदि हामी हाम्रो आईफोन बेच्न को लागी तयारी गरीरहेका छौं वा हामी केवल त्यो विशिष्ट पल को उपयोग रोक्न जाँदैछौं, यो यो समारोह निष्क्रिय गर्न को लागी राम्रो छ। यो केहि हो कि एप्पल आफैंले पनि सिफारिश गर्दछ।
यदि हामी त्यो विशेष फोन को उपयोग बन्द गर्न जाँदैछौं, या त किनकि हामी यसलाई बेच्न जाँदैछौं वा हामी यसलाई कसैलाई दिन जाँदैछौं, यो यो समारोह असक्षम गर्न को लागी सिफारिश गरीन्छ। जस्तै हामीले भनेका छौं, यो केहि हो कि एप्पल आफैले प्रयोगकर्ताहरुलाई सिफारिश गर्दछ। यदि हामीले यो गर्ने निर्णय गरेका छौं, त्यहाँ परिणामहरु को एक श्रृंखला हो कि हामी खाता मा लिनु पर्छ, प्रकार्य र विकल्प को एक श्रृंखला को लागी पहुँच गुमाएर। यो जस्तै एक समारोह को निष्क्रिय एक स्पष्ट प्रभाव छ, जसको बारे मा हामी तल तल थप बताउनेछौं।
1 मेरो आईफोन खोज्नुहोस् बन्द गर्नुहोस्
2 के हुन्छ यदि तपाइँ यो सुविधा अक्षम गर्नुहुन्छ?
3 डाटा हानि
4 ICloud बाट उपकरण मेटाउनुहोस्
मेरो आईफोन खोज्नुहोस् बन्द गर्नुहोस्
प्रश्न मा प्रक्रिया तपाइँको आईफोन मा बाहिर गरिनेछ, त्यो फोन मा कि तपाइँ प्रयोग गर्न बन्द गर्न जाँदै हुनुहुन्छ वा यदि तपाइँ मात्र यो फंक्शन अब प्रयोग गर्न चाहनुहुन्न, तब तपाइँ यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो आईफोन पत्ता लगाउन असक्षम गर्न को लागी धेरै सरल छ, त्यसैले यो सबै को लागी सजिलो हुनेछ। यी चरणहरु हामी हाम्रो फोन मा पालन गर्न को लागी छन्:
तपाइँको फोन मा सेटिंग्स खोल्नुहोस्।
तपाइँको नाम मा क्लिक गर्नुहोस्।
खोज को विकल्प वा खण्ड मा जानुहोस्।
मेरो आईफोन खोज विकल्प मा ट्याप गर्नुहोस् र त्यसपछि यसलाई निष्क्रिय गर्न विकल्प मा ट्याप गर्नुहोस्।
तपाइँको एप्पल आईडी पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्।
निष्क्रिय मा ट्याप गर्नुहोस्।
यी चरणहरु संग हामी फोन मा यो प्रकार्य निष्क्रिय छ। यदि हामी एक आईप्याड मा एउटै गर्न चाहान्छौं, प्रक्रिया उस्तै छ, मात्र हामीले मेरो आईप्याड खोज्न को लागी विकल्प छान्नु पर्नेछ, जुन उही खण्ड मा देखिन्छ जुन हामीले पहिले उल्लेख गरेका छौं। तेसैले तपाइँ खोज वा तपाइँको एप्पल उपकरणहरु मध्ये कुनै पनी चाहिएको समयमा खोज को समारोह निष्क्रिय गर्न सक्नुहुन्छ। यो केहि हो कि सहज हुन सक्छ जब कि उपकरण बेच्न वा जब तपाइँ यसलाई प्रयोग गर्न बन्द गर्नुहोस्।
यदि तपाइँ एक नयाँ फोन किन्नुभएको छ र यसमा यो प्रकार्य को उपयोग गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ उही चरणहरु पछ्याएर यसलाई सक्रिय गर्न सक्षम हुनुहुनेछ कि हामी यसको निष्क्रियता को लागी पछ्याएका छौं। यस तरीकाले तपाइँ तपाइँको आईफोन लाई हराउन वा चोरी भएको घटना मा सबै समयमा पत्ता लगाउन सक्षम हुनुहुनेछ।
के हुन्छ यदि तपाइँ यो सुविधा अक्षम गर्नुहुन्छ?
मेरो आईफोन को खोज को विचार हो कि हामी सक्षम हुनेछौं चोरी वा हराएको फोन पत्ता लगाउनुहोस्। यो प्रकार्य को उपयोग गरेर, प्रश्न मा यो उपकरण को स्थान एक नक्शा मा प्रदर्शित गरिनेछ ताकि यो पत्ता लगाउन को लागी सजिलो छ। यसबाहेक, हामी यस्तो एक ध्वनि उत्सर्जन बनाउन को लागी विकल्प दिईन्छ, ताकि हामी यसलाई एक निश्चित ठाउँ मा पाउन सक्छौं, उदाहरण को लागी, यदि त्यहाँ धेरै मानिसहरु वा वस्तुहरु छन्। यो प्रकार्यले हामीलाई टाढा बाट त्यो आईफोन लाई ब्लक गर्न को लागी अनुमति दिन्छ, ताकि अन्य मानिसहरु लाई हाम्रो फोन को उपयोग बाट रोकिन्छ। यो घटना मा ठूलो मद्दत को केहि हुन सक्छ कि हामी अब त्यो फोन फिर्ता पाउन जाँदै छैनौं।
यदि हामीले यो सुविधा अक्षम गर्ने निर्णय गरेका छौं, हामी यी विकल्पहरु मा पहुँच गुमाउँदैछौं। त्यो हो, हामी अब हामी हराएको वा चोरी भएको एउटा आईफोन पत्ता लगाउन सक्षम हुनेछौं र यसलाई नक्शामा देख्नेछौं, न त यो एक ध्वनि उत्सर्जन गर्न वा यसलाई टाढाबाट निष्क्रिय गर्न सक्षम हुनेछ। नतिजाहरु यस अर्थमा स्पष्ट छन्, त्यसैले यो केहि हैन कि यदि तपाइँ तपाइँको फोन को उपयोग जारी राख्न को लागी जाँदै हुनुहुन्छ की सिफारिश गरीएको छैन, किनकि तपाइँ घटना मा एक महत्वपूर्ण जोखिम चलाउन जाँदै हुनुहुन्छ कि तपाइँको मोबाइल चोरी वा हराएको छ।
मेरो आईफोन फेला पार्नुहोस् दुबै फोन को साथ र बन्द मा काम गर्दछ। आदर्श रूप मा, यन्त्र खोल्नु पर्छ र एक धेरै अधिक सटीक स्थान प्राप्त गर्न को लागी इन्टरनेट संग जोडिएको छ, साथ साथै छिटो यस तरीका बाट। यद्यपि यो एक प्रकार्य हो कि आईओएस १३ को प्रक्षेपण पछि फोन बन्द छ भने पनि काम गर्दछ। यो केहि छ कि निस्सन्देह सबै समय मा हाम्रो उपकरण लाई यथासंभव सरल र छिटो पत्ता लगाउन को लागी मद्दत गर्दछ, त्यसैले यो फोन मा यसको प्रयोग लायक छ।
एप्पल मात्र सिफारिश गर्दछ मेरो आईफोन पत्ता लगाउनुहोस् जब तपाइँ त्यो विशेष फोन को उपयोग रोक्न जाँदै हुनुहुन्छ। यदि तपाइँ अझै पनी त्यो उपकरण प्रयोग गरीरहनु भएको छ भने तपाइँको फोन पत्ता लगाउने सम्भावना गुमाउन चाहनुहुन्न। विशेष गरी को मामला मा कि यो एक नयाँ मोडेल हो, त्यो मामला मा यसको हानि को लागत अधिक छ, तेसैले तपाइँ यो प्रकार्य मात्र निष्क्रिय गर्नु पर्छ जब तपाइँ फोन को उपयोग रोक्न योजना बनाउनुहुन्छ (तपाइँ यसलाई प्रयोग गर्न बन्द गर्नुहुन्छ, तपाइँ यसलाई बेच्न जाँदै हुनुहुन्छ वा तपाइँ यसलाई टाढा दिनुहुन्छ)। तपाइँ धेरै टाउको दुखाई बाट बच्न सक्नुहुन्छ यस प्रकार्य तपाइँको आईफोन मा सक्रिय गरेर।
मेरो आईफोन खोज्नुहोस् को उपयोग को एक महान लाभ को हो कि हामी गर्न सक्छौं त्यो फोन बाट डाटा रिकभर कि हामी हराएका छौं वा हामी बाट चोरी भएको छ। यदि हामी पहिले नै यो निको हुने आशा गुमाएका छौं, किनकि यो धेरै टाढा छ वा एक संकेत दिन बन्द गरीएको छ, उदाहरण को लागी, एप्पल हामीलाई यो उपकरण बाट सबै समय मा डाटा रिकभर गर्न अनुमति दिन्छ। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रकार्यहरु मध्ये एक हो, किनकि यसले हामीलाई यी प्रकारका परिस्थितिहरुमा मद्दत गर्दछ। हामी फोन रिकभर गर्न सक्षम हुनेछैनौं, तर कम्तीमा सबै डाटा फेरि सुरक्षित हुनेछ।
यदि हामीसँग छ भने एक आईफोन मा यो सुविधा अक्षम गर्ने निर्णय गरे कि हामी प्रयोग जारी राख्न जाँदैछौं, हामी पनि यसमा यो समारोह छोडिरहेका छौं। त्यो हो, जब हामी मेरो आईफोन खोज्न को लागी अलविदा भन्छौं हामी पनि यसको सबै प्रकार्यहरु लाई अलविदा भन्दछौं, जस्तै कि हामीले पहिले उल्लेख गरिसकेका छौं। ती मध्ये हामी पनि यो हराएको वा चोरी उपकरण बाट डाटा को रिकभरी पाउन। यो केहि छ कि यो फोन गुमाउने घटना मा एक समस्या हुन सक्छ, खास गरी यदि हामी डेटा छ कि महत्वपूर्ण छ।
सिफारिश यो हो कि यदि हामी एक फोन मा मेरो आईफोन को प्रयोग गर्न को लागी कि (पहिलो खण्ड मा चरणहरु को अनुसरण गरीरहेछौं) लाई निष्क्रिय गर्न जाँदैछौं, यो गर्न अघि यो गरौं क्लाउड मा सबै फोन डाटा को ब्याकअप। यो कम्तिमा सुनिश्चित गर्न को लागी तरीका हो कि चोरी वा फोन को हानि को घटना मा डाटा को हानि न्यूनतम हुनेछ। तपाइँलाई थाहा छैन यो उपकरण संग के हुन सक्छ, त्यसैले डाटा को एक ब्याकअप भएकोले हामीलाई कम्तीमा सधैं त्यो डाटा सुरक्षित गर्न मद्दत गर्दछ।
ICloud बाट उपकरण मेटाउनुहोस्
यदि हामी वेब बाट iCloud प्रविष्ट गर्नुहोस् हामी पनि विभिन्न फाइलहरु वा सेटिंग्स कि हामी एप्पल उपकरणहरु मा हामी संग छ पहुँच गर्ने संभावना छ। यी विकल्पहरु को बीच मा हामी पनि आईफोन, आईप्याड, म्याक वा एप्पल घडी को रूप मा यी यन्त्रहरु को स्थान, पहुँच गर्ने सम्भावना पाउँछौं। निस्सन्देह, जब सम्म हामीसँग छ कि मेरो आईफोन प्रकार्य यसमा सक्रिय छ, अन्यथा यो खोज गर्न को लागी सम्भव छैन।
केहि समय पहिले सम्म हामी वेब बाट यो प्रकार्य निष्क्रिय गर्न को लागी अनुमति दिइएको थियो, तर एप्पल पहिले नै यो हटाईएको छ। बरु हामीसँग छ समारोह भित्र उपकरणहरु हटाउने क्षमता। यस तरीकाले, यदि त्यहाँ एक उपकरण छ कि हामी प्रयोग गर्न बन्द गरीएको छ वा चाँडै गर्न जाँदैछौं, यस मामला मा आईफोन को रूप मा, हामी iCloud मा उपकरणहरु को यो सूची बाट हटाउन को लागी अगाडि बढ्न सक्छौं। फेरि, यो केहि हो कि हामी मात्र जब हामी त्यो फोन को उपयोग बन्द गर्न जाँदैछौं। यदि हामी यसलाई बेच्छौं वा मात्र यसको प्रयोग बन्द, तब हामी यो गर्न सक्छौं। यदि तपाइँ यो गर्न चाहानुहुन्छ, अनुसरण गर्न को लागी चरणहरु छन्:
ब्राउजर बाट प्रविष्ट गर्नुहोस् iCloud वेब (तपाइँको कम्प्यूटर बाट यो गर्नुहोस्)।
खोज प्रतिमा मा क्लिक गर्नुहोस्।
नक्शा मा खोज।
उपकरण मेटाउन चाहानुहुन्छ, यस मामला मा आईफोन को लागी तपाइँ मेटाउन चाहानुहुन्छ।
विकल्प मा क्लिक गर्नुहोस् कि भन्छ आईफोन मेटाउनुहोस्।
यदि त्यहाँ एक भन्दा बढि उपकरण छ, ती उपकरणहरु को लागी यो प्रक्रिया दोहोर्याउनुहोस्।
जब हामी यो गर्छौं, प्रश्न मा त्यो उपकरण मा सबै सामग्री र सेटिंग्स मेटाइनेछ। यही कारणले यो महत्त्वपूर्ण छ कि यो प्रक्रिया को रूप मा तपाइँ देख्न सक्नुहुन्छ। जब हामी यी चरणहरु पूरा गरिसकेका छौं, अब यो आईक्लाउड को उपयोग गरी यो आईफोन पत्ता लगाउन सम्भव छैन, यसको अलावा पत्ता लगाउन को लागी यो पत्ता लगाउन को लागी असम्भव हुन को लागी आईफोन को शुरुवात मा यो समारोह लाई निष्क्रिय गरीएको छ। तेसैले यो यस सन्दर्भ मा एक महत्वपूर्ण कार्य हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » अपरेटिंग प्रणाली » मेरो आईफोन खोज्नुहोस् कसरी असक्षम गर्ने
माइक्रोसफ्ट एज मा कभर कथाहरु कसरी हटाउने